दुई मृत ताराबीच ठक्कर, पृथ्वीबाट पहिलो पटक अवलोकन - प्रविधि - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
डाइनोसरको पालामा तारा ठोक्किँदा उत्पन्न भएको तरंग अहिले पृथ्वीमा आइपुग्यो
नेपालखबर असोज ३१
दुई मृत तारा टकराएको दृश्यको कलात्मक चित्रण
द कार्नेगी इन्स्टिच्युसन फर साइन्स
दुई मृत तारा आपसमा ठोक्किएको दृश्य र तरंग आफूहरुले पहिलो पटक अवलोकन गर्न सफल भएको खगोलविद्हरुले सोमबार जनाएका छन्। आपसमा ठोक्किएर विलय हुनुअघि ती दुई मृत ताराले तीव्र गतिमा एकअर्काको फन्को मारेका थिए। यो खोज खगोल विज्ञानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको पनि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।
‘किलोनोभा’ नामाकरण गरिएको यो टक्कर पृथ्वीबाट खर्बौँ किलोमिटर टाढा ‘हाइड्रा’ नक्षत्रमा स्थित एनजिसी ४९९३ नामक आकाशगंगामा भएको हो। गत अगस्ट १७ मा पृथ्वी र अन्तरीक्षमा सो टक्कर महसुस गरिएको थियो। यद्यपि यो पृथ्वीमा डाइनोसरको राज्य रहँदा अर्थात् करिब १३ करोड वर्षअगाडि भएको टक्कर हो। तर सो टक्करबाट उत्पन्न प्रकाश र गुरुत्वाकर्षण लहर (ग्राभिटेसनल वेभ) बल्ल पृथ्वीसम्म आइपुगेको हो।
के हो मृत तारा?
‘न्युट्रोन स्टार’ भनेको नष्ट भएका ठूला ताराहरुको बाँकी केन्द्रीय भाग हो।ठूला ताराहरुको ‘सुपरनोभा’ भनिने विस्फोटनबाट बाँकी रहेको अवशेष नै न्युट्रोन स्टार हो। यिनीहरुको आकार सानो हुन्छ। करिब ३० किलोमिटर वारपार लम्बाइ हुने यी ताराहरुको पिण्डभने हाम्रो सूर्यको भन्दा धेरै हुन्छ। तर यी ताराको घनत्व यति धेरै हुन्छ कि एक चम्चाजति पिण्डको तौला अर्बौँ टन हुन्छ।
पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षल लहर पहिलो पटक दुई वर्षअघि प्राप्त गरिएको थियो। सो घटनापछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्दान्त पुष्टि भएको थियो। त्यसरी पहिलो पटक गुरुत्वाकर्षण लहर प्राप्त गर्नमा भूमिका खेलेका तीन वैज्ञानिकलाई यो वर्ष नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ।
दुई वर्षअघि प्राप्त गरिएको सो गुरुत्वाकर्षण लहर दुई ‘ब्ल्याक होल’को टक्करबाट उत्पन्न भएको थियो। ब्ल्याक होल टक्करबाट प्रकाश उत्पन्न नहुनाले तिनलाई देख्न सकिन्न र त्यसको लहरलाई सुन्न मात्रै सकिन्छ। त्यसबेलाको ब्ल्याक होल टक्करको सिग्नल एक सेकेन्डभन्दा कम समयको थियो। तर हालै प्राप्त गरिएको मृत ताराहरुको टक्करबाट प्रकाश उत्पन्न भयो र यसको सिग्नल पनि करिब १०० सेकेण्ड मात्र प्राप्त भएको थियो।
यसबाट गुरुत्वाकर्षण लहर र प्रकाश उही गतिमा हिँड्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ।
दुई मृत तारा ठोक्किँदा गुरुत्वाकर्षण लहर, प्रकाश र गामा रे मात्र होइन, सुन, प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातु पनि उत्पन्न भएको र ती धातु ब्रम्हाण्डमा छरिएको पनि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।
यो टक्कर पत्ता लगाउन विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले मेहनत गरेका थिए। अमेरिका, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा रहेका विभिन्न अब्जरभेटरीहरुले यसका लागि सहकार्य पनि गरेका थिए। करिब चार हजार वैज्ञानिकले यो खगोलीय घटनाको अवलोकन गरेको बताइएको छ।
यो अध्ययनले हाल ब्रम्हाण्डमा रहेका तत्वहरु कसरी शुद्ध हाइड्रोजन र हिलियमबाटै उत्पन्न भए भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सहज भएको पनि बताइएको छ। यसले ब्रम्हाण्डको फैलावटबारी जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, दुई न्युट्रोन स्टारबीचको टक्कर के ले उत्पन्न गर्‍यो? टक्करपछि बाँकी रहेका पदार्थहरु के भए? भन्नेजस्ता प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त गर्न बाँकी नै रहेको बताइएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित ३१ असोज २०७४, मंगलबार | 2017-10-17 16:45:42